Xiddiga Guy ee Qoyska ayaa Ka Baxay Kaalintii Cleveland Brown: Dadka Midabka Leh Waa inay Ciyaaraan - Dhaqanka Pop
Xiddiga Guy Star Mike Henry Quits Cleveland Brown Doorka: Dadka Midabka leh waa inay ciyaaraan Astaamaha Midabka
Mike Henry wuxuu ka sii baxayaa kaalintiisii ​​tobanka sano ahayd sida Cleveland Brown, oo ah jilaa uu aad u jecel yahay taxanaha xarakada leh Ninka Qoyska .
Jilaaga codka halyeeyga ah, oo caddaan ah, ayaa go’aankiisa ku shaaciyay Twitter -ka Jimcihii, isagoo qoray: ‘Waxay ii ahayd sharaf inaan ka ciyaaro Cleveland Ninka Qoyska muddo 20 sano ah. Waan jeclahay dabeecaddan, laakiin dadka midabka leh waa inay ciyaaraan jilayaasha midabka. '
Waxay sharaf u ahayd inaan ku ciyaaro Cleveland on Guy Family muddo 20 sano ah. Waan jeclahay dabeecaddan, laakiin dadka midabka leh waa inay ciyaaraan jilayaasha midabka. Sidaa darteed, waxaan ka tagi doonaa kaalintii. pic.twitter.com/FmKasWITKT
- Mike Henry (@mikehenrybro) Juun 26, 2020
Henry wuxuu ka dhawaajiyay dabeecadda Madow tan iyo xilligii caleema saarka Ninka Qoyska Sanadkii 1999. Waxa kale oo uu siiyay codkii gabadhii Latina ee Consuelaand ahayd oo hoggaaminaysay taxanaha kala -firdhinta firfircoon Bandhigga Cleveland 2009 ilaa 2013.
Go'aanka jilaaga ayaa yimid kadib markii tiro jilaayaal caddaan ah ay ku dhawaaqeen inaysan mar dambe codayn doonin jilayaasha midabka leh. Horraantii toddobaadkan, Jenny Slate waxay xaqiijisay inay ka tanaasushay kaalinteedii Missy, dabeecadda abiracial ee Netflix Afka Weyn . Saacado ka dib ku dhawaaqista/raalli-gelinta Slate, Kristen Bell waxay ku dhawaaqday inaysan mar dambe ka codayn doonin dabeecadda isirka ee Molly barnaamijka Apple TV+ Taxanaha Beerta Dhexe; Si kastaba ha noqotee, abuurayaasha bandhigga ayaa ku adkeystay Bell inuu weli ku lug yeelan doono bandhigga.
rihanna - si fiican u dhunko
ciyaaryahanka ugu fiican koox walba nba
horyaal ka mid ah yaanyada qudhuntay